Bible Mu Nsɛm Daniel wɔ Agyata Amoa no Mu - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
HYIEE! Ɛte sɛ nea asɛm ato Daniel. Nanso agyata no nyɛ no hwee! Wunim nea enti? Hena na ɔde Daniel bɛtoo agyata yi mfinimfini ha? Ma yɛnhwɛ.
Afei de na wɔfrɛ Babilon hene no Dario. Na ɔpɛ Daniel asɛm kɛse efisɛ Daniel yɛ ɔyamyefo ne onyansafo. Dario paw Daniel sɛ sodifo panyin wɔ n’ahenni no mu. Eyi maa nnipa afoforo a wɔwɔ ahemman no mu ani beree Daniel, enti nea wɔyɛe ni.
Wɔkɔɔ Dario nkyɛn kɔkae sɛ: ‘Ɔhene, yɛatu agyina sɛ hyɛ mmara foforo sɛ ɛnsɛ sɛ obiara bɔ onyame anaa onipa biara mpae adaduasa yi mu, gye wo Ɔhene nkutoo. Sɛ obi anni mmara no so a, ɛsɛ sɛ wɔtow no kyene agyata amoa no mu.’ Na Dario nnim nea enti a mmarima yi pɛ sɛ wɔhyɛ saa mmara yi. Nanso osusuwii sɛ ɛyɛ adwempa, enti ɔma wɔkyerɛw mmara no. Afei worentumi nsakra mmara no.
Bere a Daniel tee mmara no, ɔkɔɔ fie kɔbɔɔ mpae sɛnea ɔyɛ daa no. Ná nnipa bɔne no nim sɛ Daniel rennyae Yehowa mpaebɔ da. Ɛyɛɛ wɔn dɛ efisɛ ɛyɛɛ te sɛ nea nhyehyɛe a wɔayɛ sɛ wobeyi Daniel afi hɔ no bɛyɛ yiye.
Bere a Ɔhene Dario tee nea enti a na saa mmarima yi pɛ sɛ wɔhyɛ mmara yi no, ne werɛ howee kɛse. Nanso na ɔrentumi nsakra mmara no, enti na ɛsɛ sɛ ɔhyɛ ma wɔtow Daniel to agyata amoa no mu. Ɔka kyerɛɛ Daniel sɛ: ‘Migye di sɛ wo Nyankopɔn a wosom no no begye wo.’
Ɛhaw Dario araa ma wantumi anna anadwo no. Ade kyee no ɔyɛɛ ntɛm kɔɔ agyata amoa no ano. Wutumi hu no wɔ hɔ. Ɔteɛɛm sɛ: ‘Daniel, ɔteasefo Nyankopɔn no akoa! So Onyankopɔn a wosom no no tumi gyee wo fii agyata no anom anaa?’
Daniel buae sɛ: ‘Onyankopɔn somaa ne bɔfo ma obemuamuaa agyata no ano, enti wɔanyɛ me hwee.’
Ɛyɛɛ ɔhene no dɛ pii. Ɔma woyii Daniel fii amoa no mu. Afei ɔma wɔtow nnipa bɔne a wɔpɛe sɛ wokum Daniel no maa agyata no. Wɔannu amoa no ase mpo na agyata no kyeree wɔn bobɔɔ wɔn nnompe nyinaa mu.
Ɔhene Dario kyerɛw kɔmaa n’ahemman no mufo nyinaa sɛ: ‘Mehyɛ sɛ ɛsɛ sɛ obiara de obu ma Daniel Nyankopɔn no. Ɔyɛ anwonwade akɛse. Ogyee Daniel fii agyata no anom.’
Hena ne Dario, na na ɔte nka dɛn wɔ Daniel ho?
Dɛn na mmarima bi a wɔyɛ aniberefo maa Dario yɛe?
Dɛn na Daniel yɛe bere a ɔtee sɛ wɔahyɛ mmara foforo no?
Dɛn na ɛhaw Dario araa ma wantumi anna, na adekyee no dɛn na ɔyɛe?
Mmuae bɛn na Daniel de maa Dario?
Dɛn na ɛbaa nnipa bɔne a wɔpɛe sɛ wokum Daniel no so, na dɛn na Dario kyerɛw kɔmaa n’ahemman no mufo nyinaa?
Kenkan Daniel 6:1-28.
Ɔkwan bɛn so na Daniel ho pɔ a wɔbɔe no kae yɛn nea asɔretiafo ayɛ de abɔ mmɔden sɛ wɔbɛka Yehowa Adansefo adwuma no ahyɛ wɔ nnɛ mmere yi mu no ho? (Dan. 6:7; Dw. 94:20; Yes. 10:1; Rom. 8:31)
Ɔkwan bɛn so na nnɛ Onyankopɔn asomfo betumi asuasua Daniel na wɔabrɛ wɔn ho ase ahyɛ ‘atumfo a wɔkorɔn’ no ase? (Dan. 6:5, 10; Rom. 13:1; Aso. 5:29)
Ɔkwan bɛn so na yebetumi asuasua Daniel nhwɛso no na yɛasom Yehowa “daa” a yennyae? (Dan. 6:16, 20; Filip. 3:16; Adi. 7:15)